Apple ichavhura iOS 13.4 munaKurume 24 kupa Trackpad rutsigiro kune iPad | IPhone nhau
Sezvatakataura nezuro mu podcast, Apple ichangobva kuvhura mhando nyowani yePad Pro muchidimbu, uye vanozviita nekuda (pachena) kune mamiriro ari kukonzeresa iyi Coronavirus. Zvishandiso zvitsva pakati peiyo nyowani iPad Pro inomira, iyo inozopedzisira yauya nerutsigiro rweTrackpads, iyo kutsiva palaptop iri kuswedera padyo nepedyo. Y Iwe uri kuzopa sei Trackpad rutsigiro kune iyo iPad? iine itsva iOS 13.4 iyo nenzira ichavhurwa pamidziyo yese inotevera Kurume 24. Mushure mekusvetuka tinokuudza zvimwe nezve iyi nyowani vhezheni yeApple's operating system.
Neiyi nyowani iPadOS 13.4 (yakafanana neIOS 13.4) Apple ichaunza rutsigiro rwematepadheti kune iyo iPad, uye izvi zvinoreva kutie ikozvino tichava nemukana wekudyidzana needu maPads nenzira nyowani. Ingo fambisa chigunwe chako kuyambuka iyo trackpad (zvakafanana zvichaitika negonzo) izvozvi isu tichaona mafambiro ari kuita iyo inotora iyo skrini uye nekumisikidza zviito zvakasiyana zvinoenderana neapp yatiri (iwe unogona kuzviona mumufananidzo unotungamira iyi posvo). Uye hongu zvakare Tinogona kushandisa echinyakare kuwanda-kubata kwekubata kweiyo iPad zvakananga kubva kune trackpad, chimwe chinhu chinonyanya kubatsira kana tiri kushandisa keyboard uye zvinonetsa kuti isu tibate sikirini. Tinogona kubva tati chiie zvakanyanya uye zvakanyanya pfungwa yepiritsi iri kusiiwa kuti ifunge nezveiyo iPad semutsivi kune chero laptop. Trackpad rutsigiro ichaenderana nemidziyo inotevera:
iPadOS 13.4 ine trackpad rutsigiro ichave iripo munaKurume 24 semahara software yekuvandudza kune ese mamodheru e iPad Pro, iPad Air 2 uye gare gare, iPad yechishanu chizvarwa uye gare gare, uye iPad mini 5 uye gare gare.
Trackpad inoenderana ichave inowanikwa pane chero iPad inomhanya iPadOS 13.4 uye ichashanda neApple's Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2, uye Magic Mabhodhi ePad Pro. Yechitatu-bato mbeva dzakabatana kuburikidza neBluetooth kana USB zvakare inotsigirwa.
Saka unoziva, Chipiri chinotevera Kurume 24 unogona kuisa iyo nyowani vhezheni yeIOS 13.4 vhezheni iyo sekutaura kwedu isingazounze nhau huru uye iyo pasina mubvunzo yakanangiswa pane izvi zvishandiso zvitsva. Nekudaro, isu tinokurudzira kuvandudza zvishandiso zvako sezvo zvichizounza kugadziriswa kwezvikanganiso zvakapfuura. Kubva kuActualidad iPhone isu tinokuzivisa iwe nekukurumidza kana iyi iOS 13.4 yaburitswa kubva kuCupertino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Apple ichavhura iOS 13.4 munaKurume 24 kupa Trackpad rutsigiro kune iPads
Apple inononoka kuburitswa kwemitambo ye 'Beastie Boys Nhau' nekuda kwecoronavirus